Kuuriya oo laga yaabo inay toogato muwaadinin Soomaali ah oo burcad (Sawir) – SBC
Kuuriya oo laga yaabo inay toogato muwaadinin Soomaali ah oo burcad (Sawir)
Dawlada Kuuriyada Koonfureed ayaa laga yaabaa inay dil iyo xabsi daa’in madaxaa ha ku furto ay ku xukunto muwaadiniin Soomaali ah oo lagu eedeeyey inay yihiin shufto badeed kuwaasi oo aanay jirin dawlad u doodaysa, isla markaana dacwadooda la socota.
Shanta nin & qareenada u doodaya oo maxkamada ku sugan
Dhalinyaradan Soomaalida ah oo tiradoodu ka kooban tahay 5 ayaa beri go’aan waxaa ka gaaraysa dacwadooda maxkamad ku taal magaalada Busan ee ah magaalada labaad ee ugu weyn wadanka Kuuriyada Koonfureed.
Nimankan Soomaalida ah ayaa lagu eedeeyey inay afduub u qabsadeen markab laga leeyahay wadanka Kuuriyada Koonfureed oo lagu magacaabo Samho Jewelry oo ah maraakiibta qaada Kiimikada.
Mid ka mid ah kooxda maxkamada la soo taagay
21-kii bishii January ee sanadkan ayaa ciidamada kumaandsoonka ee Kuuriyada Koonfureed waxay weerar ku qaadeen markabkaasi oo lagu haystey xeebaha Soomaaliya iyagoo diley 8 ka mid ah afduubayaasha waxaana ay nolol ku wateen shanta haatan lagu maxkamadeynayo wadanka Kuuriyada Koonfureed.Sida uu maxkamada horteeda ka sheegeen kooxaha damb baarayasha iyo dacwad ku oogayaasha waxaa kale oo lagu soo oogay raggan la hayo in ay sidoo kale afduub u geysteen markab kale oo lagu magacaabo Samho Dream oo ay saarnaayeen darsi shaqaale ah kaasi oo ay siidaayeen bishii November ee sanadkii hore ka dib markii la siiyey lacag madaxfurasho ah oo gaaraysa 9 milyan oo doolar. Maxkamada degmada Busan waxaa la filayaa inay ku dhawaaqdo go’aankaasi maalinimda beri ah, waxaana la sheegay in maxkamada loo soo gudbiyey dacwada oo ay la socdaan sawiro & marqaatiyaal cadeynaya in raggan la hayo ay ku lug leeyihiin waxyaaba lagu soo eedeeyey.
Nin ka mid ah shantan nin oo lagu magacaabo Maxamed Caraaye oo 23 sano jir ah ayaa maxkamadu ku sheegtey in uu toos u xabado ugu dhuftey kabtanka markabkaasi xiligii uu socdey iska horimaadka ciidamada iyo kooxaha shuftada, waxaa lagu soo eedeeyey wiilkan in captain Seok Hae-kyun uu u kaxaystey meel xash ah si uu gabaad uga dhigto, isagoo markii ay dulyimaadeen ciidamada dhawr xabadood captan-ka ku dhuftey, sida ay sheegayaan dacwad ku oogayaasha haysta.
“Burcad badeeda waxay u qabsadeen kabtanka gabaad aadamtinimo si ay uga dhigtaan, laakiin uma jeedin Caraaye oo Kabtanka dilaya, balse waxaan u jeeday nin hubaysan oo Kabtanka eegaya, waxaana hubaa in uu ahaa Caraaye waana Caraaye kan dilka geystey” sidaasi waxaa yiri Kim Doo-Chan oo maxkamada horteeda ka jeediyey warbixin marqaati ah oo ka dhan aheyd kooxda Soomaalida.
Dacwad ku ooge projector ku soo gudbinaya dableyda oo qoryo ku haya la haystayaasha
Laakiin qareenka u doodaya wiilashan Soomaalida ayaa ku dooday inaanay jirin cadeyn rasmi ah oo loo hayo in Caraaye uu xabado ku dhuftey Kabtanka, isagoo intaasi ku daray in xabadaha qoriga AK 47 laga helay jirka Kabtan Seok, isla markaana ay jirtey oo kaliya in qasnad xabadaha lagu rito ee AK 47 ay taalay halkaasi.
Qareenada wiilashan Soomaalida ah waxay kaloo maxkamada ka horsheegeen in burcad badeedu ay ka haystayaasha u soo saareen oogada sare ee markabka si ay u muujiyaan in ay badqabaan badmaaxiinta, waxaana ay beeniyeen in ay gabaad ama dhufeys bini’aadam ka dhiganayeen.
Hadii ay dhacdo in maxkamadu go’aamiso in la qaato hadalka dacwad ku oogayaasha ee ah in Caraaye uu diley Kabtanka waxaa lagu xukumi doonaa dil, halka afarta nin ee kale ay dhici karto inay mutaan xabsi daa’in maadama lagu soo oogay dacwado la xiriira isku day dil, burcadnimo & afduub.